विवाहपछि बलिउड छोड्ने यी हुन् ९ नायिका, कट्रिनाले के गर्लिन्? :: एजेन्सी :: Setopati
विवाहपछि बलिउड छोड्ने यी हुन् ९ नायिका, कट्रिनाले के गर्लिन्?
मुम्बई, मंसिर २१
बलिउडमा विवाह अगाडि लाखौं फ्यानको मन जित्स सफल केही नायिकाहरू विवाहलगत्तै फिल्म खेल्न छोडेका छन्।
यो सूची लामो छ। बलिउडकी सफल नायिका कट्रिना कैफ विवाह बन्धनमा बाँधिदै छिन्। के उनले पनि विवाहपछि बलिउड इन्डस्ट्रिज छोड्लिन् त? कट्रिना विवाह पछि फिल्म छोड्ने पक्षमा छैनन्। हाल उनीसँग ‘फोन बूथ’ र टाइगर ३ लगायत ४ वटा फिल्ममा साइन गरिसकेकी छन्।
हेर्नुहोस् केही नायिकाहरू जो विवाहपछि फिल्म खेल्न छोडे।
सलमान खानको फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ बाट बलिउडमा धुम मच्चाउने नायिका भाग्यश्रीले १९ वर्षकै उमेरमा विवाह गरिन्। विवाह गरेलगत्तै उनले फिल्म खेल्न छोडिन्।
२. नीतु कपुर
यस्तै बलिउडमा जमिसकेकी नीतु कपुरले पनि विवाह लगत्तै फिल्म खेल्न छोडिन्। विवाह पछि परिवारलाई समय दिनुपर्ने भन्दै उनले फिल्म खेल्न छोडेकी हुन्।
३. ट्विङ्कल खन्ना
सन् २००१ मा ट्विङ्कल खन्ना र अक्षय कुमारबीच विवाह भएपछि खन्नाले फिल्म खेल्न छोडिन्।
४. सोनाली बेन्द्रे
सन् २०१२ मा नायिका सोनाली बेन्द्रेले गोल्डी बहलसँग विवाह गरेपछि फिल्म खेल्न छोडिन्। केही वर्ष पछि उनले ‘कल हो ना हो’ र ‘वान्स अपन अ टाइम इन मुम्बई दोबारा’ मा विषेश भूमिकामा देखिइन्। यसको केही समयपछि सन् २०१४ को आसपास उनी केही छोटा पर्दामा देखिइन्।
५. सायरा बानो
नायिका सायरा बानोले २२ वर्षकै उमेरमा दिलीप कुमारसँग विवाह गरिन्। विवाह लगत्तै उनले फिल्म उद्योगमा काम नगर्ने घोषणा गरिन्। आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई सफल र सहज बनाउन भन्दै उनले विवाह पछि फिल्म खेल्न छोडिन्।
६. नम्रता शिरोडकर
नायिका नम्रता शिरोडकरले सन् २००५ मा महेश बाबुसँग विवाह गरिन्। एक समयकी चर्चित नायिका नम्रता विवाहपछि हैदारावाद सिफ्ट हुँदै परिवारलाई समय दिन फिल्म खेल्न छोडिन्।
७. मीनाक्षी शेषाद्री
मीनाक्षी शेषाद्रीले पनि विवाह पछि फिल्म खेल्न छोडेकी छन्। हरिस मैसोरसँग विवाह गरेकी मिनाक्षी अमेरिका सिफ्ट भइन् र बलिउड छोडिदिइन्। हाल मिनाक्षी अमेरिकामै बालबालिकालाई क्लासीकल नृत्य सिकाउँदै आएकी छन्।
विवाह अगाडि बबिताले १९ वटा फिल्ममा काम गरिन्। रणधीर कपुरसँग २३ वर्षको उमेरमा विवाह गरेकी बबिताले फिल्म छोडिन्। करिश्मा र करीनालाई जन्म दिएपछि बबिता र रणधीर अलग भएका थिए। अलग भएको २० वर्षपछि यी दुईको सम्बन्धमा सुधार आयो।
‘राम तेरी गंगा मैली हो गई’ की सफल नायिका मन्दाकिनी विवाह पछि फिल्म खेल्न छिडिन्।
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २०, २०७८, २१:४८:००
आमा बन्न लागेकी हुन् कट्रीना?
'पृथ्वीराज' मा अक्षयको पारिश्रमिक सञ्जयको भन्दा १२ गुणा बढी!
साउथका अभिनेत्रीले एउटा फिल्मको कति लिन्छन् पारिश्रमिक?
‘लक्का जवान’को प्रचार प्रसारमा प्रियंका
विवाह बन्धनमा बाँधिए रणवीर-आलिया (तस्बिरहरू)
सलमान खानलाई रामचरणको जवाफ- मलाई पनि बलिउडमा खेल्न इच्छा छ